UTinkler uthi ingamampunge eyamahlebezi ngoBilliat | News24
UTinkler uthi ingamampunge eyamahlebezi ngoBilliat
Cape Town - Umqeqeshi weSuperSport United u-Eric Tinkler uthi ikilabhu yakhe ayinayo imali yokusayinisa umdlali weMamelodi Sundowns, uKhama Billiat.
UBilliat kubukeka sengathi uzoshiya kumaBrazilians lingakavalwa iwindi lokuthengiselana ngabadlali ngoJanuwari.
Abazithamundayo bathi lo mdlali usebheke ukuyodlala phesheya kwezilwandle manje, kepha amanye amahlebezi amkhomba emakilabhini e-PSL.
Izingqwele ze-Absa Premiership, iBidvest Wits, zingelinye lamakilabhu atshengise ukuthi angathanda ukusayina lo mdlali kanti kukholakala ukuthi i-Orlando Pirates neKaizer Chiefs nabo bamgaqele lo mdlali odabuka eZimbabwe.
Njengoba iSuperSport ikhulule yaphinde yadayisa abadlali abaningi, okubalwa kubo uJeremy Brockie oye kwiSundowns, uTinkler uyavuma ukuthi naye kuzomele aye emakethe ayoqalaza.
UTinkler nokho uthi angase aphoqeleke ukuthi ayobathungatha e-Afrika abadlali abafunayo ngenxa yokuthi abadlali be-PSL bamba eqolo.
Ube esethi ingamampunge eyokuthi basezinhlelweni zokusayinisa uBilliat: "Yebo, siyamdinga umdlali futhi akusensuku zatshwala sisayinise umdlali omusha kepha angifuni ukugeqa amagula ngoba sisasezingxoxweni."
Uthe nokho selidumela emasumpeni ngokusayinisa umshayeli omusha, wathi kodwa ngeke agagule magama.